Ezra_M – Active Healthy Kids Zimbabwe
Meanwhile lets just say that we are proud Ezra_M contributed a whooping 3 entries.
Entries by Ezra_M
Zimbabweans urged to walk to work to prevent chronic diseases
By Dumisani Nyoni The government has urged all Zimbabweans across the country to walk to work as opposed to driving, to curb the increase of non-communicable diseases that are now responsible for more deaths than all other causes combined. Speaking during the launch of the 2016 Zimbabwe report card on the physical activity for children […]
July 5, 2017 /0 Comments/by Ezra_M
Minister bemoans lack of leisure studies June 17, 2017 Sport Allen Khumalo, Sports Reporter SPORT and Recreation Minister Makhosini Hlongwane has bemoaned the lack of leisure studies among the country’s tertiary institutions. Speaking at the launch of the 2016 Zimbabwe Report Card on the Physical Activity for Children and Youth at the National University of […]
June 14, 2017 /0 Comments/by Ezra_M
Upcoming: All are welcome to attend the official launch of the 2016 Report Card on Physical Activity of Zimbabwean Children and Youth on 16 June 2017 at the NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LARGE DELTA THEATER. Programme for the 2016 Zimbabwe Report card Launch & Press Conference
Zimbabweans urged to walk to work to prevent chronic diseasesJuly 5, 2017 - 6:58 pm
Minister bemoans lack of leisure studiesJune 19, 2017 - 2:13 pm
Invitation to 2016 Report Card LaunchJune 11, 2017 - 7:49 am